Ciidamadda AMISOM oo qarax lala eegtay – Radio Daljir
Ciidamadda AMISOM oo qarax lala eegtay
Abriil 21, 2019 1:02 g 0
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa deegaanka tareedisho ee duleedka Magalada Muqdisho Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrrika ee AMISOM.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Kolonyo ka tirsan AMISOM qaraxa Miino lala eegtay xilli ay ku socdaalaayeen inta u dhaxeysa deegaanada weeydoow iyo Tareedisho,waxaana jira khasaaro kala duwan oo qaraxaasi ka dhashay.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa kadib Ciidamada AMISOM ay fureen rasaas farabadam taas oo la sheegay inay waxyeelo kasoo gaartay dad Shacab ah.
Ciidamada AMIOSM ayaa mudo daqiiqado ah waxaa ay hakad geliyeen isku-socodka dadka iyo Gaadiidka,wallow markii dambe ay dib u fasaxeen,waxaana haatana si caadi ah u socda dadka iyo gaadiidka ee deegaanada weeydow iyo Tareedisho ee duleedka Muqdisho.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo Daah-furay Shirka Soo Bandhigidda, Dib u Habaynta iyo Casriyaynta Hay’addaha Dowladda.
Guddoomiyaha Bangiga dhexe ee dhawaan la doortay oo xilka la wareegay